Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Niakatra 39.6% ny hetsika fifanarahana momba ny dia sy fizahan-tany tamin'ny volana Jona
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny hetsika fifanarahana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia nampiseho ny fahasitranana tamin'ny volana Jona, taorian'ny fihenan'ny volana vitsivitsy lasa izay.
Fifanarahana 74 no nambara tamin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany nandritra ny volana Jona.
Ny hetsika fifampiraharahana dia naneho fanatsarana ny tsena lehibe anisan'izany i Etazonia, UK, Sina ary Alemana.
Nahita ny fihenan'ny hetsika fifanarahana i India.
Fifanarahana 74 (misy ny merger & recisitions, equity privé, ary ny finances finance finances) no nambara tamin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany mandritra ny volana Jona, izay fiakarana 39.6% noho ny fifanarahana 53 nambara tamin'ny volana Mey.
Ny hetsika fifanarahana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia nampiseho ny fahasitranana tamin'ny volana Jona, taorian'ny fihenan'ny volana vitsivitsy lasa izay. Ny fitomboan'ny hetsika fifampiraharahana ho an'ny sehatra iray izay voa mafy noho ny fanidiana sy ny famerana ny fivezivezena ao anatin'ny valanaretina COVID-19, dia mety ho famantarana tsara mandritra ny volana ho avy.
Ny karazana fifampiraharahana rehetra (eo ambanin'ny fandrakofana) dia nanatri-maso ny fitomboan'ny volan'ny fifampiraharahana tamin'ny volana Jona raha ampitahaina amin'ny volana teo aloha. Raha nitombo 26.5% ny volan'ny fampiroboroboana sy ny fahazoana vola, dia nitombo 9.1% sy 137.5% koa ny isan'ireo fifanarahana famatsiam-bola tsy miankina.
Ny hetsika atao amin'ny varotra dia nampiseho fanatsarana ny tsena lehibe anisan'izany ny US, ny UK, Sina, Alemana ary Espana, raha nanatri-maso ny fihenan'ny hetsika fifanarahana kosa i India.